दुइ मिनेट लाग्छ, बिबाहित महिलाले अवस्य पढ्नुहोला ! « Light Nepal
दुइ मिनेट लाग्छ, बिबाहित महिलाले अवस्य पढ्नुहोला !
लाइट नेपाल नेपाली महिला जसको जुन विवाहको बन्धनमा बाँधिएर पतिको रूपमा स्वीकार गरेर आउनुभएको छ । उहाँहरू लाई मेरो अनुरोध श्रीमान बिदेश गएको छ भनेर स्कुल पढाउने छोराछोरी बोडिङ्ग नहाल्नु होला । कानमा टप, मुन्द्रा र घाँटीमा सिक्रि नखोज्नुहोला आँटो र गुन्द्रुक खाने मुखलाई विगारेर वास्मतिका चामल नखोज्नु होला मोही र गाबाको तरकालीलाई बंग्याएर मासु र हुस्कि र वियरमा मन नडुलाउनुहोला ।
गाउँका घरछोडेर बजारको मंगो कोठा भाडा तिरेर बस्न नखोज्नुहोला किनकी विदेशीएको श्रीमान मृत्युसँग लडिरहेको छ । जो कि कतिखेर शिकार बनेर बाकसका पेकिङ्ग हुनुपर्ने हो । तसर्थ मोजमस्ती र विलाशी जिबनशैली होइन । साधरण जिबनशैलीमा रमाउन सिक्नुहोस् ।एजेन्सी